Nkwadebe maka osisi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Nkwadebe maka osisi
Otu esi etinye "Topaz": nkọwa na ihe onwunwe nke ọgwụ
Ọrịa ndị na-akpata ọrịa dị ize ndụ maka osisi niile, site na mkpuru akwụkwọ nri na osisi ndị dị n'ime ụlọ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, onye inyeaka kachasị mma maka onye na-elekọta ugbo na onye ore fulawa ga-abụ Topaz fungicide, ntuziaka ndị ị ga-ahụ n'ime ihe dị n'okpuru. "Topaz": nkọwa nke ọgwụ ahụ ọgwụ "Topaz" bụ n'etiti ndị fungicides - ihe ndị nwere ike ibibi ma ghara ikwe ka ọganihu nke spores na mycelium nke ero nchịkwa.
Gamar "bactericide bacteria", otu esi agbaghari na itinye mbadamba (ntuziaka)
Na nhazi nke pesticides, a na-ekenye bactericides na ọgwụ dị iche iche, ma n'agbanyeghị nke a, a na-ahọrọ ha n'etiti ndị na-ahụ maka ahụike nke na-ejikọta ihe omume antibacterial na nke antifungal. A na-eji bacteria na-egbu bacteria na fungal na ala na osisi.
"Kornevin": nkọwa na ntụziaka maka iji ọgwụ
Na oge nke nkà na ụzụ, agrotechnology nke na-eto eto okooko osisi, ihe oriri na mkpụrụ osisi kụrụ adịghị eguzo. Iji gbasaa ụdị osisi ndị dị ntakịrị ngwa ngwa, anyị na-agbakarị usoro ịkụcha, Otú ọ dị, dika a maara, ọ bụghị ọnwụ ọ bụla na-agbanye mgbọrọgwụ. Mgbe ahụ, anyị na-eche ọrụ nke otu esi akpali mkpalite mgbọrọgwụ iji nweta 100% nlanarị nke seedlings.
Otu esi eji ọgwụ "Home" sitere na ọrịa nke tomato, cucumbers na poteto
Mkpụrụ ọgwụ pụrụ iche - ndị na-egbu egbu - dị mma n'ịlụso ọrịa ọgụ. Otu n'ime ndị kasị dị irè n'etiti ha bụ ọgwụ "Hom". Eji ya n'ubi, ubi, akwa akwa. Ma ka ọgwụ ghara imerụ osisi ahụ, ọ dị mkpa ịmara otú ị ga-esi tụgharịa "Hom" maka ịkụnye ya na otu esi esi eji ya eme ihe n'ụzọ ziri ezi.
Osisi na-akpali akpali "Etamon": ntụziaka maka ojiji
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị na-akpali akpali na ndị na-eto eto na-eto eto aghọwo ndị na-ewu ewu na ndị bi n'oge okpomọkụ, ndị na-elekọta ubi, na nanị ndị na-ahụ ebe a na-ahụ maka ụlọ. Ọzọ, anyị na-atụle nke ọma otu n'ime ha, ya bụ "Etamon". Ka anyị ghọta ihe ọgwụ a na ma ọ bụ iji ya. Ị ma? A na-akpọ ndị na-eto eto na-eto eto osisi phytohormones ma na-emepụta ya na osisi dị obere.
Heteroauxin: nkọwa, ihe arụ ọrụ, ntụziaka maka ojiji
Onye ọ bụla na-elekọta ubi, n'agbanyeghị ihe ọ na - etolite - osisi na - amị mkpụrụ, osisi ma ọ bụ okooko osisi, na - achọ mgbe niile na ọrụ ya na - eto eto. Ọtụtụ ndị maarala nzuzo ahụ: kedu ihe ị ga-etinye ka osisi wee kụọ nke ọma ma na-arụsi ọrụ ike na-eto eto - nke a bụ ihe na-akpali akpali, nakwa dịka mmanụ fatịlaịza, heteroauxin.
Nkọwa nke ọgwụ "Immunocytofit" na ntụziaka maka ojiji
Nkwadebe nke nduzi Immunocytofit bụ ihe ọkụkụ nkịtị maka osisi. Ọ na-ebuwanye ibu na-eguzogide ọrịa dịgasị iche iche, na-eme ka usoro nrịta ahụ dịkwuo elu, na-eme ka ihe ọkụkụ na-amịpụta ma na-ebelata mmetụta nke microgganic phytopathogenic. Ozi gbasara "Immunocytofit" bụ ngwaahịa na-eme ka ọ ghara ịdị na-arụ ọrụ na nhazi mkpụrụ osisi na osisi ornamental, dịka kukumba, tomato na poteto, nakwa ụdị osisi ọ bụla.
Ogwu "Ecosil": ntuziaka maka ojiji maka nhazi
Maka osisi nke ọrịa ma ọ bụ ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe na usoro ugbo na-ezighị ezi dara, Ecosil bụ ọkpọ na-enye ekele na-enye ume na ịdị ike. Otu esi echekwa "Ecosil" ahịhịa n'ime ubi, n'ogige na ogige okooko osisi, ihe ndị na-elekọta ubi na ndị ọrụ ubi na-ekwu na nyocha, na ihe kpatara ọgwụ a - a ga-atụle nke a.
Njiri na-efe efe na ntụziaka maka iji ọgwụ "Albite"
"Albit" na onye na-elekọta ụlọ, onye na-elekọta ubi na onye na-akwa nri bụ ọgwụ dị oké mkpa. Ndị ọrụ agronomist na-enye ya ndụmọdụ maka nkwụghachi nke osisi mgbe nrụgide nke ahịhịa na-akpata, oge ọkọchị dị ogologo, na-akpata grads nke mmebi, iji melite mkpụrụ germination, ezi mkpụrụ na iguzogide ụdị ọrịa pathogens dị iche iche.
Ntughari "Horus": ntuziaka maka ojiji
Iji hụ na ezi owuwe ihe ubi n'ubi ma ọ bụ ubi ubi ubi, a ghaghị ilekọta ihe kwesịrị ekwesị nke osisi ndị nwere ike ibute ọrịa dị iche iche na pests. Ịlụso ọrịa ọgụ mepụtara ọtụtụ ngwaọrụ na ọgwụ ọjọọ. N'ahịa anyị, ị nwere ike ịchọta ọgwụ ọhụrụ bụ "Horus", bụ nke jisiri ike nweta nkwanye ùgwù nke ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi.
Ọ nwere ike iji fungicide "DNOC" maka ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi?
Ndị nwe atụmatụ nlekota obodo nwere nnukwu nsogbu. Ọrịa na ọrịa niile dị iche iche na - akpasu ha iwe - a na - achọpụtakwa na site n'afọ ruo n'afọ, ha na - aghọ ndị ọzọ na - eguzogide ọgwụgwọ nke ngwọta ọgwụgwọ ọdịnala. Ya mere, ị ga-enwerịrị ihe ndị dị mma (n'ezie). Tụlee otu n'ime ngwá ọrụ ndị a, na-amụtakwu banyere ọgwụ a na-akpọ "DNOC" nakwa banyere ihe ọ na-eji mee ihe.
Nwere ike rabbits ịbụ dị ọhụrụ na pickled carrots
Atụmatụ maka saxifrage n'ụlọ